chatting ကောင်းသလား၊ ဆိုးသလား — MYSTERY ZILLION
chatting ကောင်းသလား၊ ဆိုးသလား
ကဲနောင်ဂျိန်ပိုစ့်လေး တစ်ခုတင်လိုက်ပြီ။ ပြောချင်တာပြောကြ၊ နောက်မှ အကြီးအကဲတွေက ဝင်ထိန်းပေးလိမ့်မယ်။
ကျနော်က စပြောမယ်။ ချက်တာဆိုတာ အလကားဟာ။ လူငယ်တွေအတွက် ဘာမှ ကောင်းကျိုးမပေးဘူး။ ချက်တင်သည် လူကိုမူးယစ်စေ၏၊ ထုံထိုင်းစေ၏၊ ပြာနှမ်းစေ၏၊ လင်ယူသားမွေးစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေ၏၊ နောက်ပိုင်း စိတ်ရောဂါပါရစေ၏။
လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရတယ်လို့ပြောရင်၊ အီးမေးလဲဆက်သွယ်လို့ရတာပဲ၊ pm ပို့ပြီးလဲ ဆက်သွယ်လို့ ရ၏၊
အင်တာနက် အသုံးပြုသူ လူငယ်တော်တော်များများကို အင်တာနက်ဘာလို့ သုံးသလဲ မေးကြည့်ရင်၊ အများစုက ချက်တင်လုပ်ချင်လို့ လို့ပြောကြပါလိမ့်မည်။
ချက်တင်လုပ်ခြင်းသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် ဘာအကျိုးမှ မရှိပါ။ မိမိတိုင်းပြည်မှ အမျိုးကောင်းသမီးများပါ တိုင်းသပါး သားများနှင့် လက်ဆက်သွားနိုင်၏။ (ချက်တင်မှာတွေ့ရင်း၊ ကျူကြရင်း)
ကျန်တာကို reply ပိုစ့်တွေ ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးမည်။ It is time to act now. :6:
ကျွန်တော့ ညီဝမ်းကွဲ လူငယ်များ တစ်နေ့တစ်နေ့ အင်တာနက်ဆိုင်လာကြသည်။ ဘာလာလုပ်သလဲမေးတော့ ဇယားလေးတွေလာစောင့်တာဟုပြောပါသည်။ ပြီးနောက် ဘဲအချင်းချင်း ဆဲကြပါတော့သည်။ မိန်းခလေးတစ်ယောက်နှင့်လည်း gtalk တွင်သူလာ invite သည်ဖြစ်၍ ချက်ဘူးပါသည်။ မိန်းခလေးများလည်း မလွယ်ပါ။ လူကို အရူးလုပ်ချင်ကြပါသည်။ ချက်ထဲတွင်ထိမ်းချုပ်ချင်လာသည်။ စိတ်ဆိုးမယ် ဘာမယ် ညာမယ်။ အားမှန်းမအားမှန်းမသိ အတင်းကိုစကားပြောချင်ကြသည်။ သို့နှင့်ထိုမိန်းခလေးအား ဘန်းလိုက်ရသည်။ ကြာတော့ ကြာပါပြီ။
ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် outlook သည် official tools အဖြစ်သုံးကာ အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ စာပို့ စာယူ။ သို့သော် လုပ်ငန်းများ မြန်ဆန်ရန်အတွက် မေးမြန်းပြောဆိုကြသော အခါ skype, msn စတာတွေဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံကြသည်။
ချက်တင်းသည် အကျိုးရှိအောင်သုံးလျှင်ကောင်း၍ ကျူရန် အချိန်ကုန်ရန်အတွက်မူ မကောင်းပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ မိတ်ဆွေများဖြင့် ရုံးချိန်ပြင်ပတွင် ချက်ပါသည်။ ဝေလံသောနေရာတွင် မိတ်ဆွေများဖြင့် စကား စမြည်ပြောဆိုရန်မူ ချက်တင်းသည် အလွန်လွယ်သော မြန်ကောင်းသက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
မှန်လိုက်လေ ဘလိုကြီး။ အခုတောင် ဘန်းကျော်အမျိုးသားကောင်းလေး ကျနော်တောင် တိုင်းတပါး သမီးတွေနဲ့ အကြောင်းပါတော့မယ်နော်။ ဘန်းကျော်မှာ Internet သုံးနေသူတွေရဲ့ 90% က email ကိုသုံးဖို့ဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲက 95% က chatting ကိုသုံးကြပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ အရင် ဘန်းကျော်မှာ Gmail ကိုပိတ်လိုက်တုန်းက Internet ဆိုင်တွေ ခြောက်ကပ်သွားလို့ Gmailကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ရတာ အထင်အရှားပဲနော်။ တချို့များဆိုချက်ရမယ်ဆို ထမင်းမစားပဲ ရေကုန်ရေခမ်းချက်ကြတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်အထိ ချက်ရင်းသေသွားတဲ့လူ မရှိသေးဘူး။ ဂိမ်းဆော့ပြီးသေတဲ့လူတော့ ရှိတယ်လေ။
ချက်တာ ဆို တာ မိသားစု ၊သူငယ် ချင်း တွေ အတွက်နေစဉ် ပုံမှန်လိုအပ် ပါတပ် ။ ရေခြားမြေ ခြားတွေ အတွက်ဆို ပိုတောင် လို့ အပ် သေးတယ် ။ q တာကတော့ တန်ဆေး လွန်ဘေး ပေါ့ ။ :d
ကြည့်ရတာ အဲဒီကောင်မလေးရုပ်ဆိုးပုံရတယ်။ :d
မြင်ကို မမြင်ဘူးပါဘူး အိုင်းစတိုင်းရယ်။ ကိုယ့်လိုဘဲ ရိုးရိုးမှတ်လို့။
အေးဗျာ၊ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက ဆော်အသစ်တွေ့ချင်လား/ဘဲအသစ်တွေ့ချင်လား အင်တာနက်သုံးဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေကြပြီဗျ။ အင်တာနက်ဆိုတာ ကောင်းတာတွေ အများကြီးပါ။ လူသားကို အကျိုးပြူပါတယ်။ ချက်တင်း ကြီးပဲ လုပ်နေကြမယ့်အစား အင်တာနက်လာပြီး စာဖတ်မယ်၊ research လုပ်မယ်၊ စာသင်မယ် ဆိုရင်ဘယ်လောက် ကောင်းကြမလဲဗျာ။ ဘန်းကျော်သား တွေအနေနဲ့ အင်တာနက်ကို ပိုပြီးတောင် အကျိုးရှိရှိသုံးသင့်သေးတယ်။ ကျနော်တို့ မျက်စိတွေကို ပွင့်စေဖို့ အင်တာနက်ကသာ အကောင်းဆုံး ကူညီပေးနိုင်မှာပါ ။ အကယ်လို့ အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ။
ချစ်ညီအစ်ကို/ညီအစ်မတို့ ချက်ချိန်လျော့၍ ဖတ်ချိန်တိုး ကြပါတော့။
ကျွန်တော့်အထင် chatting ကိုသုံးတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ရှင်းသွားတာပဲ။ ပြောင်သလင်းခါသွားပြီ:d
ခက်တာက ကလေးတွေကို ဘယ်သူက အမြဲလိုက်ပြောနေနိုင်မလဲ။ ချက် အစားထိုးလောင်စာ(အဲလေ) အစားထိုး လေ့လာစရာ တစ်ခုခုကို ရေပန်းစားအောင် လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျ။ မီဒီယာတွေ ပါဝင်လာမှဖြစ်မယ်။
ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်ကြဖို့ ဆိုတာလဲ မလွယ်ဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးတွေကိုပဲ ကြိုက်ကြတာ။ ဒီအတိုင်း ဝီကီတွေ၊ သတင်းတွေပဲ ဖတ်ဆို တော်တော်များများက ခေါက်ထားစမ်းပါလို့ ပြောလိမ့်မယ်။
Chatting တွင်ကောင်းတာများ ရှိသလို မကောင်းတာများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် chatting ထိုင်ရင်းနဲ့ india က programmer တစ်ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖူးတယ်။ စကားတွေ အများကြီးပြောဖူးတယ်။ နောက်ပြီး chatting ကနေတဆင့် ကွန်ပြူတာသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီတွေလည်း အများကြီးရခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျူတာကတော့ အခုလို ရုံးကနေသုံးရတော့ ကျူဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အချိန်အရမ်းကုန်တာ။ ကိုယ်က program ရေးလို့ကောင်းတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ တစ်တုန်တုန်နဲ့ တက်လာရော မပြောပြန်ရင်လည်း ဘာဖြစ်တယ်။ ညာဖြစ်တယ်နဲ့ စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း အပျင်းပြေပါတယ်။ အလုပ်မရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ account အသစ်တစ်ခုဆောက်လိုက်ပြီး ကိုယ့်အတွက် တကယ့်လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုပဲ invite လုပ်ပြီး အဲ့ဒီ account နဲ့ပဲ chat တော့တယ်။
ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်တကယ်ကို လိုအပ်တဲ့လူတွေနဲ့ ချက်ရတာက ပညာလည်းရသလို ပျော်စရာလည်း ကောင်းပါတယ် :67: :67: :67:
စိတ်ကူးကြည့်တာတော့ facebook, friendster လို social site ဆန်ဆန်တစ်ခုလုပ်ပြီး သူ့ထဲမှာ လေ့လာစရာ forum, wiki, edu စတာတွေကိုတွဲပေးထားလိုက်ရင် social site လာရင်း လိုင်းပြောင်းသွားအောင် လုပ်နိုင်မလားလို့ဘဲ။
ကျနော်တို.က internet စစသုံးတုံးကတော့အပြတ်အသတ်ကို chat တာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ.မှဒီလို Forum မျိုးလေးတွေရောက်လာတာ
ကို mm_legend ရေစွဲလမ်းစေတတ်တယ်ဆိုတော့
အနော့်ကို ဖြတ်နည်းလေးပေးကြဦးနော် :77:
chatting က ကောင်းတယ်..ဆိုးတာထက်..အသုံးပြုသူရဲ့အဆင့်နဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်..
Internet စစိတ်ဝင်စားမယ်..account လေးဖွင့်မယ်..နောက်..gtalk လေးပြောပြီး..chat မယ်..
ကျနော်မြင်တာက ... ... :39:
အဲဒီ chatting ကိစ္စက အသက်အရွယ်နဲ့လဲဆိုင်မယ်ထင်တယ် .... ကျနော်ငယ်ငယ် ကတော့ တော်တော် chat တယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ chatting ကရိုးသွားတယ် ... နောက် meaningless ဖြစ်လာတယ် ... ... ... But, ဒါက age နဲနဲကြီးလာမှ ခံစားမိတာနော် ... ငယ်ငယ်ကတော့ ... ဒါတွေမသိဘူး ..... chat တယ် .... စိတ်ထဲမှာ မွန်းကျပ်လာလေလေ ... chat ထဲရောက်လေလေပဲ ... ... ...
Anyway, ငယ်တုန်း chat တာကိုသိပ်အပြစ်မပြောချင်ပေမဲ့ ... chat ကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ် မသိ ဆိုရင်တော့ အပြစ်ပြောရမှာပဲ ..... ..... 25,26,27 တွေရောက်နေတာတောင် chat ကိုရူးသွပ်နေတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးတယ် ... အဲလိုလူတွေကျတော့ ....... brainless လို့တောင်ေ၀ဖန်ရမလိုဖြစ်နေပြီ .............
chat တာကကောင်းပါတယ် ...... but ၁ နာရီ chat ရင် ၁ နာရီ တော့ အကျိုးရှိအောင် Internet ကို သုံးပေါ့ ... ... ... ဒါဆိုရင် .... နတ်လူ သာဓု ခေါ်ကြမှာပါ ....
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ( သီဟိုလ် စကား )
ယောရောရှိ ... ယောရောရှိ ... ယောရောရှိ ( ဂျပန်စကား )
Хороший ... Хороший ... Хороший ( ရုရှားစကား )
~~~ ( နောက်ဆို သာဓု သာဓု သာဓု ဆိုတာကို သီဟိုလ် လိုပဲရွတ်မနေကြနဲ့တော့ ....... ကိုသန်ရာသန်ရာ Language တွေနဲ့ ရွတ်လဲရပါတယ် ... ... ... ဒီ အဓိပါယ်ပဲလေ .... ..... :39: )
Right! Ko mm_legend. I don't like chatting but I am always online. . Two months ago, I like chatting so much. It is very boring for me now. Although I open my account, I don't chat due to MZ.
ကိုယ်ကကောင်းပြီးတခြားလူကမကောင်းရင်လဲ မကောင်းပြန်ဘူး။ကိုယ်က သူငယ်ချင်းလိုဆက်ဆံပြီးပြောပေမယ့်။တချို့တွေကအဲဒီလိုမဟုတ်တာတော့မကောင်းဘူးနော်။:68:
သုံးတတ်ရင် အဆိပ်တောင် ဆေးဖြစ်သေးတာပဲ။ ကောင်းတာ ဆိုးတာက သုံးတဲ့သူအပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ အကျိုးရှိအောင် သုံးတတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်လေ။ ရာခိုင်နှုန်းက ဘယ်ဟာပိုများလဲတော့ မမေးနဲ့။ အင်တာနက်သုံးတယ်ဆိုတာနဲ့ ချက်တယ်ချည်းထင်နေတဲ့ အမြင်တွေက ခုထိကိုရှိနေတုန်း။ gtalk ပြောတာနဲ့ အီစီကလီလုပ်နေတာချည်းထင်တဲ့ အမြင်ကလည်း ရှိနေတုန်း။ ကဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
သုံးတတ်ရင် ကောင်းတယ် မသုံးတတ်ရင် မကောင်းဘူးဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ .. အဲဒီတော့ ဘယ်လို သုံးသင့်လဲ၊ ဘယ်လို မသုံးသင့်ဘူးလဲ ...
ကျွန်တော်ကတော့ 50 ရာခိုင်နှုန်းကမကောင်းဘူး 50 ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကောင်းတယ် ကိုးဆယ်တန်တို့အုပ်စုနဲ့ မတွေ့ခင်က ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်ပါတယ် သို့သော်များလည်းပဲ နောက်ပိုင်းပျင်းလာပါတယ် အဲဒီအစား စာသင်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ 100 မှာ 95 လောက်ကတော့ ချက်တင်ပဲဗျ သူတို့ထိုင်ချက်နေကျတယ်။ သူတို့ကို အမြင်ပြောင်းချင်ရင်တော့ ပိုက်ဆံပေါ့ဗျား ဥပမာ မြန်မာနိိုင်ငံမှာ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပိုက်ဆံရမယ့် ဆိုဒ်တွေထွက်လာရင်တော့ သူတို့ ဒီဖက်ပိုင်းလိုက်လာပါလိမ့်မယ်(ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာလေးရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Kyats is onlineဆိုတဲ့ဟာလေးပါ၊ စဉ်းစားနေတုန်းအဆင့်လေးရှိပါတယ်)
အင်တာနတ်စသုံးတဲ့ပထမတစ်နှစ်လောက်တော့ chatting နဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရပါသည်...:2:
ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာ လေးရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် Kyats is onlineဆိုတဲ့ဟာလေးပါ၊ စဉ်းစားနေတုန်းအဆင့်လေးရှိပါတယ်)
ကို gipsy ရေ ကျွန်တော်စိတ်၀င်စားပါတယ်...ကျွန်တော်လည်းအဲဒါမျိုးလုပ်မလို့စဉ်းစားနေတာကြာပါပြီ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစီအစဉ်ကို အခု ချရေးနေပါတယ် ပြီးရင်အစ်ကိုဆီမေးပို့လိုက်မယ် လူကတော့အများကြိးလိုမယ့်ပုံပဲဗျို့
အရှေ့က အစ်ကိုတွေ ညီတွေပြောခဲ့သလို ကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ မကောင်းတဲ့နေရာသုံးရင်တော့ မိဘပိုက်ဆံထိုင်ဖြုန်းသလိုပဲပေါ့။ ကျွန်တော်ဆိုရင် chatting သုံးရင် ကိုယ့်အတွက် ဗဟုသုတ ရှိမယ့်အကြောင်းပဲပြောဖြစ်တာများပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ် မိန်းကလေးနဲ့မှလဲ မQ ပါ။ ဟိုးအင်တာနက်စသုံးသုံးချင်တုန်းကတော့ ကျူဖူးပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒါကြီးကိုဝါသနာမပါတော့ဘူးဗျ။
အကျဉ်းချုံး ပြောရရင် chatting ကို Q ဖို့မသုံးပါနဲ့
ကိုယ့်အတွက်ဗဟုသုတဖြစ်စေပြီး အသိတိုးစေတဲ့အကြောင်းကို ပဲ ဆွေးနွေးတာကောင်းပါတယ်။
သူတို့ကို အမြင်ပြောင်းချင်ရင်တော့ ပိုက်ဆံပေါ့ဗျား ဥပမာ မြန်မာနိိုင်ငံမှာ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပိုက်ဆံရမယ့် ဆိုဒ်တွေထွက်လာရင်တော့ သူတို့ ဒီဖက်ပိုင်းလိုက်လာပါလိမ့်မယ်(ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာလေးရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် kyats is onlineဆိုတဲ့ဟာလေးပါ၊ စဉ်းစားနေတုန်းအဆင့်လေးရှိပါတယ်)
ကျွန်တော်လည်း စိတ်၀င်စားတယ်။ ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးလေ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပါ့မယ်။
ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော်အစီအစဉ် ဆွဲပြီးပါက အမ်ဇက်ပေါ်တင်ပေးပါ့မယ် အခုတော့စဉ်းစားတုနး်ပါ ဗျား
chatting ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာ သုံးစွဲသူရဲ့ စရိုက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။
'ဇ' ရှိတဲ့သူတွေကတော့ chatting မှ blog ၊ blog မှ html site ၊ php site စသည်တစ်ဖြည်းဖြည်းတက်သွားမှာဖြစ်ပြီး
မြန်မာနိိုင်ငံမှာ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပိုက်ဆံရမယ့် ဆိုဒ်တွေထွက်လာရင်တော့ သူတို့ ဒီဖက်ပိုင်းလိုက်လာပါလိမ့်မယ်(ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာလေးရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် kyats is onlineဆိုတဲ့ဟာလေးပါ၊ စဉ်းစားနေတုန်းအဆင့်လေးရှိပါတယ်)
လေးစားပါတယ် ကို ဂျစ်ပစီလေး ...
အဲဒါလေးတွေကို ကိုဂျစ်ပစီလေးတို့ပြောနေမှပဲ ကျနော်သိတော့တာ ... ဒါတောင် သိပ်မသိသေးပါဘူုး ... ကျနော် ဆက်လေ့လာဦးမယ် ....
ကို ဂျစ်ပစီတို့ စဖြစ်ရင် ... ... ကျနော်လဲ တနေရာက ၀င်ပါဖြစ်မှာပါ ...
Chatting ကနေ စီးပွါး ရှာကြည့်ရအောင်:D
ဥပမာ ~ VPS တစ်ခုဝယ် IRC Chat Room တစ်ခုထောင် botnet တွေ ထည့်ပြီး ပိုက်ဆံခိုး
စိတ်ပါရင်လုပ်ကြည့်ကြရအောင် $200 လောက်ပဲကုန်မှာနော့ ပြန်ရရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုရမှာ:D
chat တာက ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ...ကိုယ့်မိသားစုနိုင်ငံခြားရောက်နေရင်ပိုတောင် chat သင့်တယ် .....ဒါ ပေမဲ့ လို့ ကျူတာတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ဗျ :6:
ဟုတ်တယ် ဗျ ကိုညမီးအိမ်ပြောသွားတာအကောင်းဆုံးပဲ ...ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲထင်တယ် ဗျ
ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူငယ်အများစုက chat ကို ကောင်မလေးတွေ ကြူဖို့အတွက် အသုံးပြုနေကြပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းက မချက်ရရင် မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ဘူးပါတယ်. ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှတော့ ဖွင့်သာဖွင့်ထားတာပါ ဘယ်သူနဲ့မှ မပြောတော့ပါဘူး သူက အရင်လာပြောမှသာ ကိုယ်က နည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြောလိုက်တာပါ...
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ချက်တာ လုံး၀လုံး၀ မကောင်းပါ................နည်းပညာပိုုင်းဆိုင်ရာ discuss လုပ်ဖို့ကြတော့ ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားကြဘူးဗျ....
chatting က ကောင်းပါတယ် .....ဒါပေမဲ့ q တာမျိုးကြီးကတော့မသင့်တော်ပါဘူးဗျာ......
ကိုယ့်မိသားစုဝင် တို့မိတ်ဆွေတို့သူငယ်ချင်းတို့နိုင်ငံခြားရောက်နေရင် ပိုတောင် chat သင့်ပါတယ် ....ဒါပေမဲ့ mirc တို့ ဘာတို့မှာ q တာကတော့ မိဘပိုက်ဆံဖြုန်းနေတာနဲ့တူပါတယ်ဗျာ......
ပြီးတော့ဘာအကျိုးရှိမလဲဘာမှမရှိဘူး......q နေမဲ့အချိန်မှာ mz တို့wiki တို့လို web sites တွေမှာနည်းပညာတွေလေ့လာသင့်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ:6::6::6:
သုံးတတ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဒါဟာအဖိုးအဖြတ်နိုင်ပါဘူး
မသုံးတတ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဘာမှကောင်းကျိုးပေးမှ မဟုတ်ဘူး
သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွားပဲ ဟုတ်တယ်မလား
ဟုတ်ပါတယ် အနော်ဆို အမေက နို်င်ငံခြားမှာ ဆိုတော့ Gtalk ကပဲ တွေ့ရတယ်ဗျ....အဲဒီအခါကျတော့ Gtalk လေးက အဆင်ပြေပြန်ရော ဒီအတိုင်း ဖုန်းသာဆက်လို့ကတော့ မလွယ်ဘူးဗျ.။ အဲဒီအခါကျတော့လည်း Gtalk က chat တာက ကောင်းပြန်ရော အီမိုလေးပြောသလိုပါပဲ ချက်နေမယ့် အစား wiki မှာ မွေနှောက်ပြီးတော့ ရှာဖတ်နေတာက ပိုအကျိုးရှိပါတယ်...
အင်းဘယ်လိုပြောရဘ။ ကောင်းတယ်ထင်တယ်သူက ကောင်းတယ်လို့ပဲ ထင်လိုက်ပေါ့။ ဆိုးတယ်ထင်တဲ့သူက ဆိုးတယ်လို့ပဲ ထင်လိုက်ပေါ့။ တယောက်နဲ့ တယောက်ကတော့ အမြင်ချင်းမတူပါ။ အသုုံးချတာ ကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိရင်တော့ ကောင်းတာပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက် ဘာအကျိုးမှ မရှိရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ Chatting ကောင်းတယ်၊ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်း ပြတ်သင့်နေပြီလို့တော့ ထင်တယ်ဗျာ။:):):)
အင်းဘယ်လိုပြောရဘ။ ကောင်းတယ်ထင်တယ်သူက ကောင်းတယ်လို့ပဲ ထင်လိုက်ပေါ့။ ဆိုးတယ်ထင်တဲ့သူက ဆိုးတယ်လို့ပဲ ထင်လိုက်ပေါ့။ တယောက်နဲ့ တယောက်ကတော့ အမြင်ချင်းမတူပါ။ အသုုံးချတာ ကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိရင်တော့ ကောင်းတာပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက် ဘာအကျိုးမှ မရှိရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ Chatting ကောင်းတယ်၊ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်း ပြတ်သင့်နေပြီလို့တော့ ထင်တယ်ဗျာ။ :):)
ဒီ Thread လဲတော်တော်တောင်ရှည်နေပြီ ....
ကျနော် ဒါနောက်ဆုံးရေးတာပါ .... နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Chatting ကို QQ အတွက်၊ အချိန်ဖြုန်းဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲ ... အကျိုးရှိတာလေးတွေသုံးရင်း Chatting ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့ တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ ... ( ကျနော် တစ်ယောက်ထဲ ) နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ .............. :41::41::41:
Chatting သုံးတယ်ဆိုတာ သီးသန့် Communication ပိုင်းကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အကျိုးရှိတာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပတ် ကျူပြီး ချက်တွင်းနက်နေလို့ကတော့ အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်ဆိုင်တွေကလဲ ဒါနဲ့ စားနေတာဆိုတော့ ဘာမှ မပြောပဲ ငြိမ်နေကြတာပေါ့။ ဟီးဟီး ကိုစေတန်ဆို ဘာမှကို ဝင်မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် Chatting ကတော့ အကျိုးရှိရာတွေဆီကို လာတဲ့ တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ဗျ။ ချက်တင်းလုပ်ရာကနေ အင်တာနက်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးရှိရာဖတ်တွေ ရောက်လာတဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးဗျ။ ဒီတော့ဗျာ ချက်တင်သုံးရာကနေ MZ ကို ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတာလေးတွေ ဆက်ရေးဗျာ ....
ဒါဆိုရင် thread ကိုရွှေ့ရအောင်။ ဘာကြောင့်လူတွေကြူနေရသလဲ။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတားမလဲ။ ကျနော်ထင်တာကတော့ ဒီပြသနာရဲ့ အစ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ Istein ဒီဖိုရမ်ကို စဝင်ကတည်းက ကျနော်ကလေချောလဲချောတယ် တော်လဲတော်တယ် ပိုက်ပိုက်လည်းချမ်းသာတယ်ပြောတော့ တော်တော်များများက ကျနော့ကို နောက်ကွယ်က မေးငေါ့ကြမှာပေါ့နော်။:D တချို့ဆို ကွန်ပြူတာအရှေ့မှာ ဒီလိုတောင် ရေရွတ်နေလောက်တယ်။ "အိုင်စတိုင်း အစုပ်ပလုပ်ကောင် မင်းလားငါ့ထက်ပိုချောမှာ ငါမှချောတာကွ ဟားဟားဟား(ရေညှိုအထပ်ထပ်နဲ့)":D ကျနော်ရွဲ့ပြောနေတာ သိတဲ့လူနည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်။ မြန်မာကားထဲက မင်းသားလိုလုပ်ကြည့်တာလေ။ ရန်ကုန်မှာ အကျယ်ဆုံးခြံမှာနေတယ် လန်ခရူစာကလဲ စီးလိုက်သေးတယ်။ တက်တော့ ဆေးကျောင်း။ ဆေးကျောင်းမှာ ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်တယ်။ ကောင်မလေးတွေအကြောင်းပြောမယ်။ ကောင်မလေးတွေကို လိုက်နောက် လိုက်ကြူမယ်။အမယ် Exam Result ထွက်လာတော့ သူက all D တောင်ထွက်လိုက်သေးတယ်ဟီးဟီး။:D ဆေးရုံမှာနားကြပ်စမ်းတော့လဲ ဗိုက်ချေးတွန်းနေသလား အောင့်မေ့ရတယ်။:P အတွင်းမှာ အဲဒီလို မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြနေတော့ အပြင်က မနူးမနပ်လေးတွေကလိုက်လုပ်ရောပေါ့။ ဘန်းကျော်ကားတွေ ကြည့်လိုက်လေ။ 99% က အချစ်ကား၊ 1% က အုံးအွမ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင် ကျောင်းမှာလဲ ကြူ ၊ အိမ် မှာလဲ ကြူ ၊ ဆေးရုံမှာလဲ ကြူ ၊ သင်တန်းမှာလဲ ကြူ ၊ စျေးမှာလဲ ကြူ ၊ ကားပေါ်မှာလဲ ကြူ ၊ လမ်းပေါ်မှာလဲ ကြူ ၊ အမယ်တချို့ဆို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတောင် မရှောင်နော်။ ဒါကြောင့် ကြူတာတိုက်ချင်ရင် ရုပ်ရှင်တွေအရင်တိုက်လိုက်နော်။ ကျနော်တိုက်နေတာတော့ ငါးနှစ်ရှိပြီ။ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူကြူကြူ မကြူ ကြူ အမြဲတို့ကြူမည် ဖြစ်နေကြအုံးမယ်။:D
ရေးသားသူ (အနောက်မျှော်၊ ဒါးရိုး၊ ဒွေးတော်ကျော် ဖွားတော်လွမ်း၊ အဆိုးမြင်ဝါဒီ)
သက်ဆိုင်သူများ ပို့နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်ရင် ဖျက်လိုက်၍ ရပါသည်ခင်ဗျာ
:113::)) အိုင်းတိုင်းတို့ကတော့ လုပ်ပြီ။ သူတို့ခင်ဗျာလည်း အကန့်အသတ်တွေနဲ့ ရိုက်ရတာကိုးဗျ။ အဲဒီကားတွေ ကြည့်ရင် ကိုယ်ကိုကိုယ်တောင် သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ဝင်လာတယ်။ သူတို့တွေကကျတော့ သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်လိုက်ကြတာ ... တိုးတက်လိုက်ကြတာ ငါတို့တွေကျတော့ ဘာမှလည်း မဟုတ်ပါလား ဆိုပြီးတော့လေ... အဲဒီလို မီဒီယာတွေဖက်က လူငယ်တွေကို ကောင်းတဲ့ဖက်တွေကို စံပြအနေနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ ... ဒါပေမယ့် လုပ်ကြမယ် မထင်ပါဘူးဗျာ ... ဒီတော့ ရှင်းတယ် ကြည့်ကို မကြည့်တော့ဘူး ... :d
ချက်တင်ထဲက ဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ့တယ် အစ်ကိုမေးထားတာလေ ကျွန်တော်တင်ထားဖူးတယ်လေ MZ ကြီးကို..........ဆိုတဲ့ Thread လေဗျား အဲဒီမှာ မမ်ဘာတွေက သူတို့ ဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောထားပါတယ်ဗျ
ခွင်လွတ်လိုက်ကြပါ သုံးရက်နဲ့တစ်ကားအပြီးရိုက်ရတာကိုးဗျ ဟုတ်တယ်ဗျား ကျွန်တော် တောင်မြန်မာကားမကြည့်တာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ် မကြိုက်တော့တာ.........တကယ်ကို
ဟိုနား ဒီနားသွားရင် mercedes နဲ့သိန်းသုံးဆယ်ကျော်တန် ဂါဝန်ကြီးနဲ့
မြန်မာကားတွေ ကြည့်ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ် (စိတ်ပျက်ဖို့:D) နောက်ဆုံးတော့ မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ညားမယ် ရဲတွေရောက်လာမယ် လူကြမ်းတွေသေမယ် ဒါမှမဟုတ် ရဲဖမ်းသွားမယ်...... ဒါပဲလေ...။ ပြောတာက ချက်တင်အကြောင်း..အခုပြောနေတာက မြန်မာကား...
ဆောရီး ကိုmm_legend တော့ပစ်ချောသွားလို့.....။
နောက်ဆုံးအဖြေထုတ်လိုက်တော့ ချက်တာကို အကျိုးရှိမည့်နေရာတွင် အသုံးပြုပါက ကောင်းပါတယ်...။ အီစီကလီတွေနဲ့ အရည်မရအဖတ်မရတွေပြောနေတာတော့ မကောင်းပါ...။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ တချို.ကြတော့ internet ဆိုင်သွားရင် game သွားဆော့တယ်လို့ထင်ကြပြန်တယ်။ :14:
အမှန်တော့ မကောင်းသူအများစုကြောင့် ကောင်းသူအနည်းစု အထင်လွဲခံရတယ်ထင်တာပဲ။:2:
ဒါတွေကို ကြည့်ရင် မြန်မာလူငယ်တွေ အင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်တာ အကောင်းထက်အဆိုးကများတယ်
ဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြသလို ဖြစ်နေတယ်။ :106:ဒါတွေအတွက်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ :13:ကောင်းတာလုပ်ရင်
ကောင်းကျိုးရပြီး:1: မကောင်းတာ လုပ်ရင် မကောင်းကျိုိးရမှာပေါ့ဗျာ။ (အခုတော့ ကျွန်တော် အင်တာနက်ဆိုင်သွားဖို့ father & Mother နဲ့ အတိုက်အခံလုပ်လိုက်ဦးမယ်။:d
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ မကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ကျွန်တော်လဲကြည့်ကိုမကြည့်ဖြစ်တာကြာပြီဗျ။ 5movies ကလာတဲ့ ကားတွေတောင် တော်တော်စိတ်၀င်စားမှ ကြည့်ဖြစ်တယ်ဗျို့။
3ရက်1ကားရိုက်သူများကြီးပွားချမ်းသာ၏။ ကြည့်သူအမျိုးသားကောင်း အမျိုးသမီးကောင်းများစာရိတ္တပျက်စီး၏။
ဒါဆိုရင် thread ကိုရွှေ့ရအောင်။ ဘာကြောင့်လူတွေကြူနေရသလဲ။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတားမလဲ။ ကျနော်ထင်တာကတော့ ဒီပြသနာရဲ့ အစ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
အင်းသူပြောတာမှန်တယ်။ ချက်တင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က မြန်မာ ဗွီဒီယို ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ စတွေ့ဘူးတာ။ စပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။
မင်းသား နန္ဒ(အဲတုန်းကညီနန္ဒ) နဲ့ မင်းသမီး အိနြ္ဒာကျော်ဇင်ထင်တယ်။ ကားနာမည်က ဗိုင်းရက်စ်များ၏ အထုပ္ပတ္တိတဲ့။ အဲမင်းသားနဲ့ မင်းသမီး kmd သင်တန်း အခန်းအတွင်းမှာ lan ကနေလှမ်းချက်ကြ၊ ကျူကြစလုပ်ပြတာလေ။ ဒန့်တန့်တန့်။ :d:d:d kmd ဆိုတာလဲ စပေါက်သွားရော။
မဟုတ်ဘူးဘော်ဘော်ရဲ့ ဆွေးနွေးတာရပ်သင့်တာ မဟုတ်ဘူး ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံပြောင်းသင့်တာ။ မဟုတ်ရင် သကြားစားရင်ချိုတယ်နော် သိလား။ ငရုတ်သီးစားရင်တော့ စပ်သဗျာ။ သံပရာသီးအခွံပါ ကိုက်စား ချဉ်လိုက်တာနော်။ ကော်ဖီမှုန့်ကို လျှာနဲ့ရဲ့ တကယ်ခါးတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်လဲ ဘန်းကျော်သားတွေ နိုင်ငံတကာမှာ အလုပ် interview ဝင်တော့ အပြောခံရတယ်လေ။ yes, no, thank you ဒီသုံးလုံးပဲသိကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အနော်လဲပါတယ်။:D:D:D